ဒုက္ခသည်ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းနှင့်ခရီးသွားခငြ့်အရေး | USAHello | USAHello
A person with refugee or asylum status who wishes to travel outside of the USA needsaRefugee Travel Document. ဤစာရွက်စာတမ်းမပါဘဲ, you may not be eligible to re-enter the United States and you could be placed in detention or immigration court.
The Refugee Travel Document looks likeapassport and can be used like one. သို့သော်, asarefugee, please understand that until you areaUS citizen, there is some risk to traveling outside of the USA because you could lose your status. You may haveavery good reason to travel outside of the USA. But it is important that you know about the potential immigration challenges involved.
တစ်ဦးဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းလျှောက်ထားရန်, you need to file Form I-131, ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းများအတွက်လျှောက်လွှာ. ပုံစံ file နိုင်ရန်အတွက်, please carefully read the instructions to complete Form I-131. ဥပဒေရေးရာပုံစံများ Completing အလွန်ရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်, ပင် US မှာမွေးဖွားလူများအတွက်. သင်တစ်ဦးဥပဒေရေးရာပုံစံဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ခဲ့လျှင်, သင့်ရဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးအေဂျင်စီထံမှအကူအညီရရန်အကောင်းတစ်စိတ်ကူးက. သငျသညျအသကျရှငျဘယ်မှာပေါ် မူတည်., သင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောလိပ်စာပုံစံမေးလ်မှရပါလိမ့်မယ်. Make sure you mail the form to the correct address.
ဟုတ်ကဲ့. သင့်ရဲ့အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီး, သငျသညျပုံစံနှစ်မျိုးလုံးနှင့်သင့် biometric များအတွက်အခကြေးငွေပေးချေရန်ရှိစေခြင်းငှါ (fingerprinting နှင့်ဓာတ်ပုံများကို). You may be able to apply forafee waiver if you can show financial hardship.
ငါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစွန့်ခွာပြီးနောက်ကျွန်မဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းများအတွက် Form ကိုငါ-131 file နိုင်သလား?
သငျသညျအမရေိကနျပွညျထောငျစုစွန့်ခွာမီတဲ့ဒုက္ခသည်ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းများအတွက် Form ကိုငါ-131 file သင့်တယ်. သငျသညျအမရေိကနျပွညျထောငျစုထားခဲ့ပါမတိုင်မီသင်တစ်ဦးဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းများအတွက် file ဘူးဆိုရငျ, သငျသညျဒုက္ခသည်တစ်ဦးအဖြစ်သင့် status ကိုဆုံးရှုံးသို့မဟုတ်နောက်ကျောကိုအမေရိကန်ဖို့လာမယ့်တစ်ဦးခက်အချိန်ရှိသည်နိုင်. သင်ထက်လျော့နည်းများအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပမှာဖြစ်ရပြီဆိုပါကသာလျှောက်ထားနိုင်ပါသည် 1 သင့်လျှောက်လွှာထဲမှာလှည့်သည့်အချိန်တွင်တစ်နှစ်. သို့သော်, ဒါကြောင့်သင်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု left မတိုင်မီသင်သည်သင်၏ Form ကိုငါ-131 တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ထင်ရှားလျှင်သင်ထားတဲ့နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်ရုံးသင်၏လျှောက်လွှာကိုလက်ခံလိမ့်မည်ဟုမယူဆနိုင်ပါတယ်.
ငါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဖြစ်၏နေချိန်မှာငါကဒုက္ခသည်ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းရဖို့ Form ကိုငါ-131 file ပါလျှင်, ပုံစံနေဆဲဆိုင်းငံ့နေစဉ်ငါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစွန့်ခွာလျှင် USCIS သည့် Form ကိုငါ-131 ငြင်းပယ်လိမ့်မည်ဟု?
USCIS ကိုသင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရှိနေစဉ်သင် Form ကိုငါ-131 file ကြောင်းအကြံပြုပေမယ့်, သင်သည်သင်၏ biometric တင်သွင်းခဲ့ကြပါလျှင်သင်တစ်ဦးခွင့်ပြုချက်နှင့်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုပြဿနာများအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်မလိုအပ်ပါ (ဓါတ်ပုံ, လက်ဗွေ).
အချို့တိကျသောအခြေအနေများတွင်, သင်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်တိုင်းပြည်သို့ပြန်လာနိုင်ပါတယ်. ဥပမာ, ရင်းနှီးသောမိသားစုဝင်နေမကောင်းဖြစ်ပြီးသို့မဟုတ်သေဆုံးလျှင်, သငျသညျမူရင်းသင့်ရဲ့တိုင်းပြည်သို့ပြန်လာခွင့်ဖြစ်နိုင်သည်. But if you are an asylee or refugee and return to the place you claimed protection from, you may lose your asylum status.
သင် left တိုင်းပြည်ပြန်သွားဖို့လိုအပျပါ, we recommend that you first talk to your resettlement agency oralawyer.
ဒုက္ခသည်ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းနှင့် Form ကိုငါ-131 အကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်အတွက်, you can read or download this USCIS information. Also please read more about your rights asarefugee.